Yay ahaayeen ciyaartoydii ku guulaystay kubbadda dahabka ah ee ka dhacay raadaarka kubbada cagta | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Yay ahaayeen ciyaartoydii ku guulaystay kubbadda dahabka ah ee ka dhacay raadaarka kubbada cagta
Yay ahaayeen ciyaartoydii ku guulaystay kubbadda dahabka ah ee ka dhacay raadaarka kubbada cagta
Himilo – Xiddiga da’da yar ee Barcelona Pedri ayaa loo magacaabay wiilka dahabiga ah ee FIFA sanadka 2021 isagoo Spain u saftay sanad taariikhi ah oo cajiib ah.
18-sano jirkaan ayaa kasoo dhalaalay Barca ka hor inta uusan u ciyaarin Spain labadii tartan ee Olombikada iyo Euro 2020.
Sanadihii ugu dambeeyay, Erling Haaland, Matthijs de Ligt, iyo Kylian Mbappe ayaa ku guuleystay abaalmarinta qaaliga ah.
Inkastoo xirfadahooda ay weli ku jiraan marxaladda culeyska badan ee noloshooda kubbadda cagta, dhammaan ku guuleystayaasha Kubadda Dahabka ma aysan gaarin guulo waara.
Hadaba waxaa jira shan ciyaartoy oo ku guulaystay kubbada dahabka ah ee ka dhacay raadaarka kubbada cagta.
Ku guuleystaha bilowgii billaddan dahabiga ah wuxuu ahaa ciyaaryahankii hore ee Tottenham Hotspur Rafael van der Vaart.
Kadib 20-sano, Van der Vaart ayaa horay saddex sano ugu qaatay Eredivisie ee Ajax markii uu ku guuleystay abaalmarinta.
Inta badan waa la illoobay sida loo ixtiraamo Van der Vaart ee waddankiisa, iyo xusuusta weyn ee Johan Cruyff cusub, da’da yar ayaa lagu amaanay imaatinkiisii ​​labaad.
Si kastaba ha ahaatee, u dhaqaaqista Real Madrid ayaa hor istaagtay horumarkiisa ka hor inta uusan kubaddiisii ​​ugu fiicneed ku ciyaarin White Hart Lane – ninka reer Holland ayaa ka fariistay ciyaaraha 2018, waxaana uu haatan ka yahay ku xigeenka maamulaha Esbjerg ee Denmark.
Anderson – 2008
Anderson ayaa laga yaabaa inuu yahay Flop-ka ugu weyn liiska, waxaana uu yimid Manchester United 2007dii isagoo garab ka ciyaara oo awood badan leh.
Hal sano markii uu joogay Old Trafford, Anderson waxaa la guddoonsiiyay abaalmarinta wiilka dahabka ah ee FIFA.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray arrimo jir ahaaneed iyo qaab khaldan oo arkay saamiga Anderson oo hoos u dhacay, iyo markii uu ka tagay United 2015, xaaladdiisu waxay ahayd mid aad u liidata.
Anderson wuxuu ku laabtay Koonfurta Ameerika, laakiin Yurub waxay ahayd mid ku xun, wuxuuna siiyay markii ugu dambeysay ee Adana Demirspor ee Turkiga ka hor inta uusan kabaha bixin isagoo 32 jir ah 2020.
Brazilian-ka ayaa laga yaabaa inuu caan ku yahay in Ogsajiinta la siiyo ka dib markii uu 36 daqiiqo ku ciyaaray magaalada aadka u adag ee La Paz.
Xilli ciyaareed ka dib markii Anderson la siiyay Kubadda Dahabka ah, waxay ahayd mareegta Brazilian kale si uu kor ugu qaado: Alexandre Pato.
Waxayna ahayd markii ay u muuqatay doorasho cad, Pato wuxuu ahaa mid ka mid ah guryaha kubbadda cagta ugu shidan, wuxuuna si joogto ah u ahaa gooldhalinta AC Milan – Pato xitaa wuxuu shukaansaday Silvio Berlusconi gabadhiisa markii uu dhinac joogay.
Si kastaba ha ahaatee, dhaawac yar oo soo gaaray iyo burburkii u dhaqaaqistiisii PSG, ayaa wax ka beddeshay qaab ciyaareedkiisa xirfadiisa ciyaareed, ka dib markii uu masiibo ka soo gaaray Chelsea, Pato waxa uu mugdi galay isaga oo soo maray China iyo Brazil.
Waqtigii Pato ee Shiinaha wuxuu ahaa mid faa’iido badan leh, oo mar wiil la yaab leh wuxuu arkay hantidiisa oo cirka isku shareertay $145 milyan (£ 108million).
32-sano jirkaan ayaa dib u soo muuqday xagaagii markii uu u soo wareegay kooxda ka ciyaarta horyaalka MLS ee Orlando City, isagoo u maleynaya inuu rajeynayo inuu dib u helo qaab ciyaareedkiisa Milan.
Mario Gotze – 2011
Waxaa jiray waqti uu Mario Gotze u muuqday mid u sharaxan mustaqbalka Ballon d’Or iyo laga yaabee xitaa inuu guuleysto.
Gotze ayaa la guddoonsiiyay wiilka dahabiga ah ee 2011, wax yar ka dib, waxa uu xiddig u ahaa markii Borussia Dortmund ay gaartay finalka Champions League.
Bandhigii uu kusoo bandhigay darbiga Jaallaha ah ayuu ku mutaystay inuu u dhaqaaqo Bayern Munich, waxaana uu ahaa mid aad uga dhex muuqda xulka qaranka Germany, halkaas oo uu ku guulaystey koobkii aduunka uu ku hubsaday booskiisa taariikhda.
Si kastaba ha ahaatee, Gotze ayaa la kulmay dhibaatooyin caafimaad, 2017-kii waxaa laga helay cudurka ‘myopathy’, xanuunka murqaha oo dhib ku hayay dhowr xilli.
Bayern ayaa u ogolaatay Gotze inuu ku laabto Borussia Dortmund, laakiin markii uu la dhibtoonayay cudurka ‘myopathy’ waxay u dhaqaajisay PSV, si ay uga caawiso inuu mar kale awoodiisa u helo.
Muddo gaaban – horraantii 2010-kii – Malaga waxay ahayd mid ka mid ah kuwa ugu miisaanka culus Spain, waxayna garaaceen Madrid iyo Barca.
Iyadoo Manuel Pellegrini uu hoggaanka u hayo – iyo Solomon Rondon, oo dhaliyay goolasha – Malaga ayaa u caga jugleysay booskeeda Champions League.
Isco, oo uu weheliyo Santi Cazorla, ayaa u ahaa dahabkooda iyadoo qaab ciyaareedkiisa uu ku mutaystay inuu u dhaqaaqo Real.
In kasta oo uu si fiican ku billawday, wax walba waa ay dhammaatay ninkan Isbaanishka ah, waxaana uu weli ku jiraa kooxda isagoo ah nin la illoobay Madrid.
Previous: Laba maalin oo aad soontaa isbuucii waxey kaa cawin kartaa inaad miisaanka iska dhinto
Next: Macluumaad ku saabsan harada Victoria